'Hokkora Dirree Dhawaatti uumame kanaaf garee Saatanaaw jedhamudha' jedhan jiraattoonni - BBC News Afaan Oromoo
'Hokkora Dirree Dhawaatti uumame kanaaf garee Saatanaaw jedhamudha' jedhan jiraattoonni
Hookkara magaalaa Dirre Dhawaa Roobii eegalee tureen namoonni lama ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himaniiru, kanneen miidhaman akka jiranis dubbatan.
Yeroo ammaattis magaalattii keessatti tajaajilli geejibaa dhaabbachuusaa nutti himan. "Haalli jiru sodaachisaadha" jedhu jiraataan kun. Jiraataan biraa ammoo "Dirre Dhawaa keessa shororkaa guddaatu jira. Waraanni magaalaa keessa guutee jira," kan jedhan jiraataan magaala Dirre Dhawaa inni biraan, daandiwwan cufamanii goommaan konkolaataa daandirratti gubamaa turuusaa nutti himan.
Halkan kaleessaas iddoo Baabur Raahmaa jedhamutti walitti bu'iinsi uummamuusaa, manni tokko gubachuusaa fi walitti bu'iinsichis miseensota Raayyaa ittisa biyyaatin waldhabdichi dhaabachusaatu dubbatame. Hookkara magaala Dirree Dhawaa keessatti irra deddeebiin mul'atuf gareen Saatanaaw jedhamuun ijaarrame sababadha kan jedhan jiraataan magaalichaa inni biraan namootni lamaan guyyaa Roobii ajjeefaman kaleessa awwaalamuu isaanii himan. Kana malees "mootummaan dhimma Dirre Dhawaa dagateera," jedhan jiraataan kun. "Saatanaaw ijaarama siyaasaati. Meeshaa waraanins nama ajjeessaa jiru" jedhan. Dabalataan miseensotni garee Saatanaaw jedhaman baay'een Raayyaa Ittisa Biyyaafi qaama Poolisii keessaa kan bahan ta'uus dubbatan. Miseensotni garee kanaa qaamolee nageenyaa magaalichaa walin hidhata akka qabanis himan. Miseensi poolisii magaala Dirre Dhawaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan gareen Saatanaaw jedhamu namoota dhaabsisuun waraqaa eenyummaa ilaalun miidhaa geesisaa jiraachuu nutti himan. Gochaan kun ammoo keessattuu iddoowwan Poolis Kaampiifi Masqalanyaa jedhamutti akka hammaatu poolisiin kun himu. "Paatroolif yeroo deemnuufi galaa yeroo jennun 'isinummaan deemaa galaa' nun jedhu. Waan kana yeroo heddu dubbannulle furmaata hin arganne," jechuun gareen Saatanaaw jedhamu hojii isaaniif irratti dhiibbaa geessisaa akka jiru dubbatan. Miseensotni garichaa heddu ta'uu kan himan poolisiin kun hooggansa Poolisii magaalichaa birattille ajaja hojii kennamu irratti rakkoon akka jiru himu.
Ajajni kennamu gandaa gandatti gargar akka ta'e fi rakkoon kun immoo hooggansa Poolisii magaalichaa sadarkaa giddugaleessaarra bira akka jiru dubbatan. "Ani sabaaf sablammiifan dalaga" kan jedhan miseensi poolisii Dirre Dhawaa shakkamtootni miseensoota Saatanaaw ta'an akka namoota biroo to'annoo seeraa jala oolaa akka hin jirre himan. Rakkoon magaalaa Dirree Dhawaa keessatti mul'atu qaama rakkoo biyyattii keessatti mul'atuu akka ta'e kan himan immoo Komishinara Komishinii Poolisii magaala Dirre Dhawaa kan ta'an Alamuu Magraati. Haata'u malee "amala Dirre Dhawaatin uummata waliin jiraachaa ture sabaa fi amantaan adda qoodun akka dhagaa walitti darbatu godhamaa jira," jedhan. Rakkoon namoota lamaan ka'es gara waldhabdee sabaa yookiin amantaatti akka jijjiiramu himan.Waldhabdee kaleessa fi har'a iddoowwan magaalattii tokko tokkotti uummaman tasgabeessufis qaamoleen nageenyaa fi uummatni hojjechaa akka jiran Komishinarichi dubbatan. Yaadawwan garee Saatanaaw jedhamu ilaalchisuun jiraattota fi miseensa poolisii biraa ka'anif deebii akkasumas lakkoofsa namoota sababa hookkara kanaan miidhamanii sababa addaan cituu bilbilaatin Komishinar Alamuu Magraa biraa deebii argachuu hin dandeenye.